Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – H/Jeclo oo Hargeysa Marti ku noqotay + Lambarka “7” oo Kulmiye Faalku u qabtay Iyo Natiijadii Codadka Hargeysa + Beelaha ay kasoo jeedaan
H/Jeclo oo Hargeysa Marti ku noqotay + Lambarka “7” oo Kulmiye Faalku u qabtay Iyo Natiijadii Codadka Hargeysa + Beelaha ay kasoo jeedaan
Tolow dimuqraadiyada Somaliland ma qabyaaladaa?
Beelaha ay kasoo kala jeedaan Xildhibaanada Cusub ee Degaanka Hargeysa. Tii Burco ka dhacday uunbaa Hargeysana ka dhacday, Reer waliba ururka uu Inankoodu horjoogaha ka yahay maahee urur kale iskama sharaxin. Wataa dimuqraadiyada SL. Toloow dimuqraadiyada Somaliland ma qabyaaladaa?
Lambarka 7 iyo Kulmiye oo faalku u qabtay.
Hargeysa Kulmiye 7
Borama Kulmiye 7
Burco Kulmiye 7
Lascanood Kulmiye 7
Gabiley 7 Kulmiye 7
Xisbiga Kulmiye 7 kursi
Xisbiga UCID 4
Burco iyo Hargeysa oo Caruurta Buuryo qabka ahi ka codaysay sida ay cadeeyeen goob-joogayaashii ajaanibka ahaa Iyo Ku Cel-celinta oo tiro beeshay+Boobkii Kulmiye Xukumka shareecada Islaamka ee ka qayb gelista iyo tahniyadaynta dabaal-degyada ciidaha Gaalada.